ISHUMI elinesihlanu (K)
Fallowfield, England, United Kingdom
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguLaura
Wamkelekile kwiSHUMI ELINESIHLANU!
Ebizwa ngokuba 'yiTokyo' ngenxa yoyilo oluncinci, uya kufumana le studio ingaqhelekanga kwiSHUMI ELISHA, iDolophu yaseVictoria ebuyiselweyo kwiikhilomitha ezi-3 emazantsi eZiko leSixeko saseManchester. Le studio yendlu eneplani evulekileyo yokuhlala iyilwe ngokupheleleyo kusetyenziswa i-birch ply yomgangatho ophezulu. Sisebenzise isimbo saseJapan esigcina indawo yefenitshala kubandakanya ibhedi ephantsi yeqonga kunye nesofa yefuton. Le ndawo ikwindawo yokuhlala. Ngokungqongqo akukho maqela
Ikhitshi elenziwe nge-bespoke ngesandla liza kukhuphisana nefriji engaphantsi kwekhawuntara enendawo yesikhenkcisi, i-oveni kunye nesitovu sokungenisa.
Ukulala okumnandi kubalulekile! E-Airshack sisebenzisa ophumeleleyo ukuba Yeyiphi iMatrasi eBalaseleyo kule minyaka mi-4 idlulileyo kuzo zonke iipropathi zethu. Yonke ilinen yokulala ikumgangatho wehotele womqhaphu waseYiputa.
ELISHUMI elinesihlanu yindawo yokuhlala yangasese enesango elineegadi ezinomhlaba kunye nepatio ejonge emazantsi ukuze iindwendwe zethu zizonwabele.
Sinendawo yokupaka yeendwendwe kodwa oku kukufika kuqala. Kwindawo yokupaka ezitalatweni kusimahla kwaye akuthintelwanga ngamaxesha onke.
ISHUMI elinesihlanu ifumaneka kumgama oziikhilomitha ezi-3 emazantsi ukuba umbindi wesixeko. Zininzi iivenkile, iikhefi, iibhari kunye neendawo zokutyela ezikufutshane. Kukho ivenkile enkulu yaseSainburys kwimizuzu nje yokuhamba.
Izimvo eziyi-1 960
Sisebenzisa isitshixo sokhuseleko ukuze sizihlole ukuze ungasoloko udibana neendwendwe zethu. Nangona kunjalo, sihlala sikhona ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fallowfield